Mirongatra tanteraka ny valanaretina: maherin’ny 5 000 izao ireo tratran’ny covid-19, roa indray no lavo | NewsMada
Mirongatra tanteraka ny valanaretina: maherin’ny 5 000 izao ireo tratran’ny covid-19, roa indray no lavo
Namono olona roa indray ny covid-19. Tsy vitan’izany fa efa maherin’ny 5 000 ireo nifindran’ny valanaretina eto amintsika ary mbola lohalaharana amin’ny hamaroan’ izany ny avy eto Analamanga.
Niampy roa indray ireo matin’ny coronavirus. Avy any Boeny sy Analamanga izy ireo ka tafakatra 37 izany izao ireo namoy ny ainy, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Sambany nisy lavon’ity valanaretina ity tany Mahajanga raha tany Atsinanana sy Analamanga hatrany ny maro amin’ireo nodimandry.
Mbola foiben’ny valanaretina kosa hatreto ny eto Ana­lamanga. Avy eto avokoa ny 193 amin’ireo tranga vaovao miisa 213, omaly. Mihanaka any Vakinankaratra koa ny covid-19, amin’izao fotoana izao. 11 ireo nifindran’izany raha iray avy kosa ny any Diana sy ny any Atsinanana. Niverenan’ny coronavirus in­dray koa ny any Ihosy, Iho­rombe. Ahitana tranga miisa roa. Tsy voafaritra kosa ny telo amin’ireo tranga vaovao.
Eto Analamanga ireo marary mafy 55 amin’ny 59 etsy an-daniny, mbola maro anisa amin’ireo marary mafy ny eto Analamanga. Mi­isa 55 izany amin’ireo «for­me grave» miisa 59. Mitsin­jara ho 31 etsy Befelatanana raha 14 eny Anosiala. Miisa enina kosa eny Andohatape­na­ka ary telo eny Fenoarivo, miampy ny iray eny Ambo­himiandra. Manampy ireo ny marary mafy any Antsirabe, miisa telo sy iray any Atsimo Andrefana.
Tsy misy marary tsaboina intsony ao CHU Morafeno na izany aza, miisa 116 ireo sitrana. Miisa 18 amin’ izany avy eto Analamanga. Miavaka ao anatin’izany ny tsy fisian’ny olona marary tazonina sy tsaboina intsony ao amin’ny CHU Morafeno, Toamasina. Tafakatra 2 494 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana.
Mihoatra ny 5 000 ireo nifindran’ny valanaretina araka izany, tafakatra 5 080 ireo nifindran’ny va­lanaretina eto amintsika. Maherin’ny antsasak’io, 2 549 mbola tsaboina sy arahi-maso ny toe-pahasa­lamany. Miisa 29539 ny fi­tambaran’ny fitiliana vita na­nomboka ny 19 marsa, hatramin’ny omaly.